5G နဲ့ OLED Super Retina XDR မျက်နှာပြင် ပါတဲ့ iPhone 12 Pro နဲ့ Pro Max ကို ကြေညာပြီ – DigitalTimes
Apple က သတင်းများစွာ ထွက်နေတဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော် iPhone 12 Pro နဲ့ Pro Max ကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ သူတို့မှာ OLED Super Retina XDR မျက်နှာပြင်၊ HDR နဲ့ Dolby Vision တွေ ထည့်သွင်းထားပြီး အောက်ပြုတ်တာကို မျက်နှာပြင်က ၄ ဆ ပိုခံနိုင်တဲ့ Ceramic Shield ပါလာပါတယ်။ A14 Bionic Chip မောင်းနှင်ထားပြီး ရေအနက် ၆ မီတာမှာ မိနစ် ၃၀ အထိ သုံးနိုင်ပါတယ်။ Stainless Steel ကိုယ်ထည်နဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး အနောက်ဘက်ကို ဖန်နဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။
iPhone 12 Pro မှာ 12MP Main , 12MP 120 Degree Ultrawide နဲ့ 12MP Telephoto (4x Optical Zoom) ကင်မရာ ၃ လုံးကို အနောက်ဘက်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Pro Max မှာ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း ပိုကြီးတဲ့ ဆန်ဆာပါတဲ့ Wide ကင်မရာ ၁ လုံး ပါလာပြီး Low-light စွမ်းရည်က ၈၇ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုက်ပါတယ်။ Ultrawide ကင်မရာနဲ့ 5x Optical Zoom ထောက်ပံ့တဲ့ Telephoto ကင်မရာတွေ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ကင်မရာ အားလုံးအတွက် Night Mode ပါလာတဲ့အပြင် Night Mode Time-lapse Mode အသစ် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ Smart HDR3လုပ်ဆောင်ချက် အသစ် ပါလာပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ ရှုခင်းတွေကိုတောင် သဘာဝကျအောင် ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါတယ်။
Apple က Pro မော်ဒယ် ၂ လုံးဟာ 60fps Dolby Vision ပါတဲ့ HDR ဗီဒီယိုတွေကို စွမ်းရည်အမြင့်ဆုံး ရိုက်ကူးပေးနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ဖုန်းတွေလို့ ကြွားလုံးထုတ်လိုက်ပါတယ်။ LiDAR Scanner အသစ်က AR Experiences တွေ ပိုသဘာဝကျစေသလို Low-light ရှုခင်းတွေအတွက် Autofocus က ၆ ဆ ပိုကောင်းလာပါတယ်။ A14 Bionic နဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် Night Mode Portrait တောင် ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘူးထဲမှာ Charger မပါလာပေမယ့် MagSafe Wireless Charger ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Specs အပြည့်အစုံကို အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
•	iPhone 12 Pro- 6.1-inch (2532×1170 pixels) OLED 460ppi Super Retina XDR display, up to 1200 nits brightness, HDR, Dolby Vision, Ceramic Shield protection
•	iPhone 12 Pro Max -6.7-inch (2778×1284 pixels) OLED 458ppi Super Retina XDR display, up to 1200 nits brightness, Ceramic Shield protection
•	128GB,256GB and 512GB storage options
•	iPhone 12 Pro- 12MP wide-angle (f/1.6) camera, 7P lens, optical image stabilization, True Tone flash, 4K video recording at 60 fps, Slo mo 1080p at 240fps, 12MP 120° Ultra Wide (f/2.4) secondary camera, 5P lens, 12MP Telephoto camera with f/2.0 aperture with 4x optical zoom range and Digital zoom up to 10x, Night mode portraits enabled by LiDAR Scanner
•	iPhone 12 Pro Max – 12MP wide-angle (f/1.6) camera, 7P lens, 1.7μm pixel size, Sensor-shift optical image stabilisation, True Tone flash, 4K video recording at 60 fps, Slo mo 1080p at 240fps, 12MP 120° Ultra Wide (f/2.4) secondary camera, 5P lens, 12MP Telephoto camera with f/2.2 aperture with 2.5x optical zoom in, 2x optical zoom out, 5x optical zoom range and Digital zoom up to 12x, Night mode portraits enabled by LiDAR Scanner
•	iPhone 12 Pro dimensions: 146.7 ×71.5×7.4mm; Weight: 187grams
•	iPhone 12 Pro Max dimensions: 160.8 ×78.1×7.4mm; Weight: 226grams
•	Built-in rechargeable lithium-ion battery with MagSafe wireless charging, fast charging, up to 17 hours (iPhone 12 Pro) / 20 hours (iPhone 12 Pro Max) of video playback
Pro ၂ လုံးစလုံးအတွက် Gold, Graphite, Silver နဲ့ Pacific Blue အရောင်တွေ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
•	iPhone 12 Pro 128GB – Rs. 1,19,900
•	iPhone 12 Pro 256GB – Rs. 1,29,900
•	iPhone 12 Pro 512GB – Rs. 1,49,900
•	iPhone 12 Pro Max 128GB – Rs. 1,29,900
•	iPhone 12 Pro Max 256GB – Rs. 1,39,900
•	iPhone 12 Pro Max 512GB – Rs. 1,59,900
iPhone 12 Pro ကို အိန္ဒိယမှာ ဒီလ ၃၀ နဲ့ Pro Max ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ရောင်းမှာပါ။ တန်ဖိုးအနည်းဆုံး အနေနဲ့ iPhone 12 Pro 128GB ဟာ ၂၁ သိန်းနဲ့ Pro Max 128GB ဟာ ၂၃ သိန်းလောက် ကျသင့်မှာပါ။
Nubia Watch ကို နိုင်ငံတကာမှာ ရောင်းပြီ